Ogaden News Agency (ONA) – Maamul Cusub oo loo Doortay OYSU London-
Maamul Cusub oo loo Doortay OYSU London-
Sawiraan dib ayaa kaso galin doona.
Ururka dhalinyarada iyo Ardeyda ee OYSU London ayaa maanta isugu yimid shir aad u heersareeya shirkaas oo howlo badan lagu ansixiyay ayaa waxaa sidoo kale lagu doortay maamul cusub oo haga shaqada.
Kulankan ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka Jaaliyada London iyo madax kamid ah Hoggaanka HAAB. Sidoo kale waxaa shirkan lagu casuumay marti sharaf uu kamid ahaa Maxamed gacmadheere.
Shirka oo aha Laba Waji ayaa lagu furay Aayadaha Quraanka iyo wacyi diini ah oo uu soo jeediyay Sheekh Xasen Sheekh Cabdi oo halkaas kasoo jeediyay wacdi diini ah oo dhalinyarada dhinacyo badan uu kula hadlay.
Kulanka ayaa waxaa furay Gudoomiyaha jaaliyada London Mudane Ismaciil oo kusoo dhaweeyay dhalinyarada Xafiiska Cusub ee Jaaliyada Ogadeniya ee London ka furatay Galbeedka, sidoo kale waxa uu ka hadlay sida ay jaaliyada Ogadeniya ee London ugu hanweyntahay ururka dhalinyarada ee OYSU London oo sanadihi lasoo dhaafay howlo badan ka fuliyay wadanka UK.
Shirkan ayaa Waxaa siminaar ku aadan Waxtarka dhalinyarta halkaas kasoo jeediyay Maxamed Gacmadheere oo kamid ah Hoggaanka HAD islamarkaasna kamid ah Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka Denmark. Gacmadheere ayaa ka hadlay arrimo badan isaga oo ku dheeraday Hadafka mideeya urur, waxuuna kula dardaarmay dhalinta inay adkeeyaan hadafka Ururka JWXO oo ah midka mideeya shacabweynaha somalida Ogadeniya ee halganka kujira. Waxa uu ka hadlay oo kale waxyaalaha dibu dhaca ku keen ummad iyo waxyaalaha horumariya umada.
Sidoo kale Mudane Caleen, xidhiidhiyaha Jaaliyadaha Ogadeniya ee wadanka UK ayaa siminaar kooban usoo jeediyay Dhalinta isaga oo ka hadlay Waajibaaka Dhalinta. Mudane calen ayaa sheegay in dhalinyarada waajibka saaran uu yahay inay tababaro qaateen oo ay helaan biseyl dhinac kasta ah si ay ula wareegaan Xilka ay maanta hayaan Madaxda Jabhada. Waxa uu ku dhiiri galiyay dhalinta inay bartaan waajibaadka saaran.
Mudane Daahir Tamuje ayaa isna kamid ahaa masuliyiinta sare ee HAAB ee kasoo qeyb galay kulankan. Muane Daahir ayaa soo dhaweyay waxqabadka Ururka Dhalinyarada ee London. Waxa uuna sheegay in aad ugu faraxsanyahay in uu kasoo qeyb galo kulankan dhalinyarada oo lagu dooranayay Maamul cusub. Waxa uu amaan u soo jeediyay Maamulki hore ee Ururka dhalinyarada oo xilkooda ku eka maanta isaga oo ku dhiiri galiyay maamulka cusub ee la dooran doonana inay iyana gutaan waajibaadka saaran.
Mujaahid Sheekh Ibraahim Xoghayaha Guud ee OYSU ayaa isna ka hadlay shirkan oo xog badan ka bixiyay howlaha laga rabo OYSU waxyaalihi qabsoomay saddexdii sano ee OYSU daladiisa lasameeyay. Sidoo kale hadalo guubaabo ah oo ku haboona shirka halkaas kasoo jeediyay
Qeybti Labaad ee Kulanka.
Waxaa qeybtii labaad ee kulankan laguda galay warbixino looga hadlay waxqabadkii ururka dhalinyarada. Sidoo kale waxaa la tiro koobay xubnaha kasoo qeyb galay kulankan ee cod bixiyaasha ahaa. Iyada oo lasoo jeediyay waajibaadka Xogheynta oo ahaa jagada la dooranayay. kadib markii la aqriyay qodobada xeerka ee ku qoran Xeerka Guud ee OYSU ee qoraya Niaamka Doorashada.
Waxaa laguda galay in la yeedhiyo xubnaha u taagna Doorashada. Iyada oo uu ku guuleystay Xoghayaha Maamulka OYSU ee London Halgame Mustafe Xaaji Diirane.
Mustafe ayaa loo doortay innuu sii hayo jagada Xoghaynta ee OYSU London mudo hal sano ah 20013-2014.
Intaas kadib Waxaa shirka ka hadlay oo xilwareejin sameeyay maamulki hore ee Ururka dhalinyarada OYSU London oo uu hoggaaminayay Halgame Salaad Cabdullahi Kaahin.
Salaad Cabdullaahi ayaa hambalyo usoo jeediyay xoghayaha cusub isaga oo khibradii mudadii uu hayay shaqada uga waramay maamulka cusub. Waxaa kale oo halkaas ka hadlay Xubnihii kale ee maamulka OYSU London oo uu kamid yahay Mudne Bashiir Cabdullahi.
Kulankan ayaa waxaa guubabo badan soo jeediyay xubno badan oo kamid ah ururka oo u hambalyeeyay xoghaynta islamarkaasna balan qaaday inay howlaha ururka inay aad u xoojin doonaan.
Ururka dhalinyarada OYSU ee London ayaa laga sugaya sanadkan inay fuliyaan howlo badan oo miiska u saaran.
Wakaalada Wararka Ogadeniya oo shirkan goob joog u aheyd ayaa qoraalo badan kasoo diyaarisay iyo sawiraan kulanka dhalinyarada OYSU London ee filo.